I-China Wenza kanjani ama-auto dashboards Umkhiqizi nomhlinzeki | I-Mestech
Izingxenye zepulasitiki zemoto
Ideshibhodi yezimoto iyingxenye ebalulekile yemoto, enezinsimbi ezahlukahlukene zokuqapha, amadivayisi asebenzayo nezinhlelo zogesi.
Ipulasitiki ideshibhodi ezenzakalelayo ingaphakathi elibalulekile emotweni.
Ama-auto dashboards ngokuvamile enziwe nge-resin epulasitiki "elungisiwe i-PP" noma "i-ABS / PC". Ideshibhodi yezimoto (ebizwa nangokuthi i-dash, iphaneli yensimbi, noma i-fascia) iyiphaneli yokulawula evame ukutholakala ngqo ngaphambi komshayeli wemoto, ikhombisa izinsimbi kanye nezilawuli zokusebenza kwemoto. Izilawuli eziningi (isb. Isiteringi) nezinsimbi kufakwa kudeshibhodi ukukhombisa isivinini, izinga likaphethiloli nomfutho kawoyela, ideshibhodi yesimanjemanje ingabamba izinhlobo eziningi zamageji, nezilawuli kanye nolwazi, ukulawula isimo sezulu kanye nokuzijabulisa izinhlelo. Ngakho-ke yakhelwe futhi yenziwa ngesakhiwo esiyinkimbinkimbi ukulingana nokuthola lawo ma-control nezinsimbi ngokuqinile nokwenza isisindo sazo.
Isistimu yedeshibhodi yezimoto
Kuma-dashboard ahlukahlukene, izinqubo ezithintekayo nazo zihluke kakhulu, ezingafingqwa ngokulandelayo:
1. Ideshibhodi yepulasitiki elukhuni: ukubumba ngomjovo (izingxenye ezifana nomzimba wedeshibhodi) Welding (izingxenye eziyinhloko, uma kunesidingo) umhlangano (izingxenye ezihlobene).
2. Ideshibhodi eqinile ye-foam: umjovo / ukucindezela (amathambo wedeshibhodi), ukuncela (isikhumba namathambo) ukusika (imbobo nomphetho) kwenhlangano (izingxenye ezihlobene).
3. umshini wokubumba / opulasitiki ohlanganiswe ulayini (isikhumba) amagwebu (ungqimba lwegwebu) ukusika (onqenqemeni, umgodi, njll.) Ukushisela (izingxenye eziyinhloko, uma kudingeka) ukuhlangana (izingxenye ezihlobene).
Izinto zokwakha ingxenye ngayinye yedeshibhodi
Igama lengxenye Izinto Ubukhulu (mm) Isisindo seyunithi (igramu)
ithuluzi lensimbi 17Kg
Umzimba ophezulu wephaneli yensimbi I-PP + EPDM-T20 2.5 2507
Uhlaka lwe-Airbag TPO 2.5 423
Iphaneli yensimbi umzimba ophansi I-PP + EPDM-T20 2.5 2729
Ithuluzi elisizayo lomzimba wephaneli I-PP + EPDM-T20 2.5 1516
Iphaneli yokunquma 01 I-PP + EPDM-T20 2.5 3648
Iphaneli yokunquma 02 I-PP-T20 2.5 1475
Iphaneli yokuhlobisa 01 PC + ABS 2.5 841
Iphaneli yokuhlobisa 02 ABS 2.5 465
Amapayipi omoya I-HDPE 1.2 1495
Ukuhambisa i-ashtray PA6-GF30 2.5 153
Iphaneli langaphambili le-DVD emotweni
Ideshibhodi yezimoto nesikhunta
Izinqubo eziyinhloko zokwenza amadeshibhodi ezenzakalelayo zimi kanje:
Inqubo yokubumba umjovo: izinhlayiya zepulasitiki zokomisa emshinini wokubumba umjovo ngokusebenzisa isikulufa se-shear kanye nokushisa komgqomo nokuncibilika ngemuva kokujova kwinqubo yokupholisa isikhunta. Ngubuchwepheshe bokucubungula obusetshenziswa kakhulu ekwenzeni ama-dashboard. Isetshenziselwa ukwakha umzimba wamadeshibhodi aqinile-epulasitiki, uhlaka lwamathambo amumethe ipulasitiki futhi athambile nezinye izingxenye eziningi ezihlobene. Izinto zeplastiki zedeshibhodi ezilukhuni zisebenzisa kakhulu i-PP. Izinto ezisemqoka zamathambo wedeshibhodi yi-PC / ABS, PP, SMA, PPO (PPE) nezinye izinto eziguquliwe. Ezinye izingxenye zikhetha i-ABS, i-PVC, i-PC, i-PA nezinye izinto ngaphandle kwezinto ezingenhla ngokuya ngemisebenzi yazo ehlukene, izakhiwo nokubukeka kwazo.
Uma udinga ukwenza izingxenye zepulasitiki noma isikhunta sedeshibhodi, noma uma udinga eminye imininingwane.Sicela uxhumane nathi.
Langaphambilini Isikhunta ngezigaba
Olandelayo: Ikesi lepulasitiki elingenamanzi kabili le-intercom walkie-talkie
Izingxenye zepulasitiki eminyango yezimoto
I-Automobile bumper kanye ne-injection molding
Ukwenza isirinji yezokwelapha epulasitiki
Amabhokisi wamathuluzi epulasitiki
Plastic isondo futhi umjovo udini